ရွှေဘိုထောင် ဆူပူမှု တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ လာရောက် ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေး - Yangon Media Group
ရွှေဘိုထောင် ဆူပူမှု တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ လာရောက် ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေး
ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၂၂
ရွှေဘိုအကျဉ်း ထောင်တွင် အကျဉ်းသားများလွတ် ငြိမ်းသက်သာခွင့် ရရှိရေးအတွက် တောင်းဆိုရာမှ ထောင်ဆူပူမှုဖြစ်ပွားပြီး စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီး ချုပ်နှင့်အဖွဲ့ လာရောက်ပြီး ညှိနှိုင်း ဖြေရှင်းပေးခဲ့ရကြောင်းသိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရွှေဘိုမြို့ ရွှေဘိုအကျဉ်းထောင်တွင် ဧပြီ ၂၂ ရက် နံနက် ၈နာရီခွဲမှ စတင်ကာ (ကျား )အဆောင်(၁) အကျဉ်းသားများမှစတင်၍ ဆူပူ အော်ဟစ်ကာ လွတ်ငြိမ်းသက်သာ ခွင့်ရေးအတွက် တောင်းဆိုရာမှ အဆောင်(၂)၊ အဆောင်(၃)သို့ ကူးစက်ပြီး ထောင်ဆူပူမှု စတင်ဖြစ်ပွား ခဲ့ကြောင်း ရွှေဘိုခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ စုံစမ်းသိရသည်။
ဆူပူမှုဖြစ်ပွားရာ ရွှေဘိုအကျဉ်း ထောင်သို့ နံနက် ၈နာရီ မိနစ်၎ဝ ခန့်တွင် ရွှေဘိုခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဒုတိယရဲမှူးကြီးငွေတိုး ဦးဆောင်သည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၄ဝနှင့် ရွှေဘိုအကျဉ်း ထောင်တာဝန်ခံအရာရှိ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ထွန်း ဦးစီးအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်း၍ စောင့်ကြည့်ထိန်း သိမ်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့နောက် နံနက် ၉နာရီ ၁ဝ မိနစ်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာမြင့်နိုင်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဦးကမ်ဇာမုံ၊ ရွှေဘိုမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာအေဇင်လတ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်မျိုး၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမိုးကျော်သူ၊ ရွှေဘိုခရိုင် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကိုကိုအောင်နှင့်အဖွဲ့ ရောက်ရှိလာပြီး နံနက် ၉နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဝန် ကြီးချုပ်ဦးစီးအဖွဲ့နှင့် အကျဉ်းထောင်တာဝန်ခံအရာရှိ လက်ထောက်ညွှန် ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ထွန်းအဖွဲ့တို့မှ အိပ်ဆောင်များအတွင်း ဝင်ရောက်၍ အကျဉ်းသားများနှင့်တွေ့ဆုံကာ အကျဉ်းသားများ၏ တင်ပြတောင်းဆိုမှုများအား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ရာ နံနက် ၁ဝ နာရီ ၁ဝမိနစ် တွင်အေးချမ်းမှုရရှိခဲ့ကြောင်း ရွှေဘို မြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးမိုးကျော်သူထံမှ သိရသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီး ဦးကမ်ဇာမုံက ”ထောင်ဆူပူမှုဖြစ်လို့ သွားရောက်ဖျန်ဖြေတာဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပါတယ်။ သူတို့က တရားမျှတမှုမရှိ ဘူး။ တရားမျှတရေးက တို့အရေး ဖြစ်တယ်ပေါ့။ ဆန္ဒပြတဲ့အတိုင်းပေါ့။ တချို့က အဖမ်းခံတာ ခြောက်လပဲ ရှိတာလွတ်သွားတယ်တဲ့။ တစ်နှစ်နှစ်နှစ်ရှိတဲ့လူကတော့ မလွတ်ဘူး ပေါ့။ အဓိကတော့ လွတ်ငြိမ်းသက်သာခွင့်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဖြစ်တာပေါ့။ သူတို့တင်ပြတာတွေကို အထက်ကို တင်ပြပေးမယ်လို့ ဖျန်ဖြေပေးခဲ့တာပေါ့။ ဆူပူတာတော့ အကုန်လုံးပါပဲ။ ထောင်နဲ့ချီပဲ။ အကုန်လုံးက အော်ဟစ်တောင်းဆိုတာ။ သူတို့လိုချင်တာကို တောင်းဆိုတာ။ အကျဉ်းသားတွေက သူတို့အုပ်စုနဲ့ အုပ်စုတိုက်ထဲမှာပဲ အော်ဟစ်ကြတာ။ အပြင်ကို မထွက်ပါဘူး။ ၁ဝ နာရီကျော်မှာ အားလုံးအေးဆေး ဖြစ်တယ်”ဟု ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ဧပြီ ၂၂ ရက်တွင် ပြောသည်။
အကျဉ်းသားများ တောင်းဆိုမှုများကိုသေချာစိစစ်ပြီး ပြည်ထောင် စုအစိုးရအဖွဲ့ထံ တင်ပြသွားမည်ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုမရှိသကဲ့သို့ အရေးယူမှုလည်း မရှိကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။ ရွှေဘိုခရိုင် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မ တီဥက္ကဋ္ဌ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကို ကိုအောင်က ဧပြီ ၂ဝ ရက်၊ ၂၁ ရက်တွေမှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီး တွေ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ ရွှေဘိုမြို့နေ ပြည်သူလူထုနဲ့တွေ့ဆုံ ပွဲပြုလုပ်ကြောင်း၊ အကျဉ်းထောင်ကျနေသူတွေ ထောင်ဝင်စာလာတွေ့ သူများမှတစ်ဆင့်သိရှိခဲ့ပြီး ‘တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိရေး’ဆိုပြီး အော်ဟစ်တောင်းဆိုခဲ့ကြပြီး ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ ဝန်ကြီးတွေ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တွေ့ဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ကြ ကြောင်း အကျဉ်းကျသူများ၏ပြော စကားအရသိရှိရပြီး ဝန်ကြီးချုပ်မှ အကျဉ်းကျနေသူများ စာစုတင်ပါ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးထံ ဆက်လက် တင်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အေးချမ်းစွာနေထိုင်ကြရန် ပြောဆိုခဲ့ရာ ပြေလည်မှုရရှိခဲ့ကြောင်း ဒီမိုကရေ စီတူဒေးသို့ ဧပြီ ၂၂ ရက်တွင် ပြောသည်။
WYHW၊ MT (SB)
မြန်မာ့ဆန် အိုင်ဗရီကို့စ်တွင် ဖျက်ဆီးခံရသော်လည်း ပြည်ပဈေးကွက်ကို ထိခိုက်မှုမရှိနိုင် ဟုဆ?
နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ တိရစ္ဆာန်ရောဂါ ထိန်းချုပ်စစ်ဆေးရေးစခန်း ကွတ်ခိုင်မြို့တွင် ဖွင့်လှစ်
မီနီ မာရသွန်ပြိုင်ပွဲ အတွက် ဆေးလိပ်ကုမ္ပဏီ တစ်ခုက စပွန်ဆာပေးထားခြင်း အပေါ် ပြည်သူဝေဖန်မှုကြေ?
နယ်ခြားစောင့် ရဲကင်းတစ်ခုကို တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ အမည်မသိ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ လက်နက်ကြီးဖြင့် ပစ်
ငြိမ်းချမ်းရေးရရန် ခက်ခဲနေခြင်းမှာ သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက် တရားမျှတစွာ ကြည့်သည့် အမြင် အားနည်းနြေ
အရေးပါသော အချိန်တွင် ဒဏ်ရာရခဲ့ခြင်းအတွက် ယူကျုံးမရဖြစ်မိကြောင်း ချိန်ဘာလိန် ဖွင့်ဟ
မန်ယူတွင် ယခင်က DNA ပြန်ရနေပြီဟု ဖာဂူဆန် ချီးကျူးခဲ့